Isgaarsiintii Degmada Ceelbarde oo dib hawada ugu soo laabatay iyo Gudoomiyaha Demadaasi oo ka hadlay . – Puntland Voice
Isgaarsiintii Degmada Ceelbarde oo dib hawada ugu soo laabatay iyo Gudoomiyaha Demadaasi oo ka hadlay .
May 24, 2010 11:34 am Views: 23
Ceel-Barde (AB):-Wararka ka imaanaya Magaalada Ceel-Barde ee Gobolka Bay ayaa sheegaya in isgaarsiintii degmadaasi ay dib hawada ugu soo laabatay kadib markii ay dhawaan jareen Ciidamo Itoobiyaan ah oo halkaasi gaaray.
Gudoomiyaha Degamada Ceelbarde ee Dowlada KMG Soomaaliya Ibraahim Cumar Dheere ayaa saxaafada u sheegay sababtii isgaarsiinta markii hore loo xiray ay ahayd xeelad dhanka Milatariga islamarkaana ay hada wax kasta caadi ku soo laabteen.
“wuu dhamaaday qorshihii aan isgaarsiinta u jarnay” ayuu yiri Ibraahim Cumar Dheere
Ibraahin Cumar dheere ayaa mar wax laga weydiiyay Oday dhaqameedydii ay Itoobiyaanku kaxeysteen ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray in wax itoobiyaan ahi yimaadeen Magaalada Ceelbarde, sidoo waxaa uu beeniyay in wax Odey dhaqameed ah la xiray.
“ma jirto Nafar magaalada inta laga qabtay la xabisay,iyo wax itoobiyaan sheegta oo magaalada soo gaaray, warkaasi waa waxba kama jiraan” ayuu yiri
Warka Gudoomiyahaani ka soo baxay ayaa ku soo aadaya xili dhawaan Magaaladaasi ay soo gaareen Ciidamo Itoobiyaan ah islamarkaana ay xabsiga u taxaabeen mid ka mid ah Odey dhaqameedyada deegaankaasi caanka ah.